“Haddii aan nahay dhallinyarada kasoo jeeda Somaliland, ma aqbaleyno in kuraasteenna hal qof jeebka loo geliyo” – Kalfadhi
“Haddii aan nahay dhallinyarada kasoo jeeda Somaliland, ma aqbaleyno in kuraasteenna hal qof jeebka loo geliyo”
March 6, 2021 Hassan Istiila
Dhallinyaro kasoo jeeda deegaannada Somaliland ooo maanta shir jaraa’iid ku qabtay magaalada Muqdishu, ayaa ugu baaqay madaxweyne Farmaajo in uu dalka ka qabto doorasho, isla markaanna kuraasta Somaliland aan jeebka loo gelin hal qof.
Mid kamid ah dhallinyarada oo ka hadlay kulanka, ayaa xusay in saaka ay tageen taalada Daljirka Daahsoon iyaga oo diidan madaxweyne Farmaajo.
“Madaxweyne haddii aad u adkeysan weyday shan qof oo dhallinyaro ah oo ka yimid Somaliland, ma waxaad u adkeysan kartaa haddii ay kuugu soo kacaan saddex milyan oo Muqdishu deggan? Adiga oo sidaasi sharci darrada ah u fadhiga Villa Soomaaliya, ma u maleyneysaa in aad madaxtooyada joogi doonto.? Haddii aan nahay dhallinyarada kasoo jeeda Somaliland ma aqbaleyno in kuraasteenna hal qof jeebka loo geliyo”.
17-kii bishii hore Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi, oo soo saaray war-saxaafadeed ayaa sheegay in aan wax tixgelin ah la siinin dadka reer waqooyi ee Somaliland ee midnimada u taagan, mana jirto cid ku metesha dhammaan shirarkii looga hadlayey masiirka dalka iyo doorashooyinka.
Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Puntland oo doonayay inuu ka gaaro aaska hooyadii oo isagii geeriyooday